Al Shabaab oo khasaarooyin dhimasho iyo dhaawacba u geysatay, dad toddobo bax Gobolka Hiiraan ku dhiganaayay
Ururka Al Shabaab oo gacanta ku haaya Deegaanka Booco ee Gobolka Hiiraan, ayaa waxay rasaas ku fureyn dad xaflad toddobo ah ku dhiganaayay Deegaankaasi, kadib markii ay ka caroodeen ciyaarta Hidaha iyo Dhaqanka, oo ay goobtaasi ku soo bandhigeen.
Deegaanka Booco oo qiyaastii 25km dhinaca Koonfur kaga toosan Magaalada Baladweyne ee Xaruunta Gobolka Hiiraan, ayaa waxay rasaastii ay Shabaab fureyn ugu geeriyootay haweeney ka mid ahayd, dadkii ku sugnaa xaflada toddobo baxa ah.
Sidoo kale waxaa uu dhaawac ka soo gaaray ilaa seddex ruux oo haween ah, waxaana laba ka mid ah dhaawacyadoou la sheegay inay yihiin kuwo daran.
Dadkaan dhaawacmay ayaa waxaa dhaawacyadooda loo soo qaaday dhinaca Magaalada Baladweyne, oo lagu wado in halkaasi lagu daaweeyo.
Saraakiisha Ururka Al Shabaab ee Gobolka Hiiraan ayaan weli ka hadlin dadka masaakiinta ah ee ay wax yeelada ugu geysteen Deegaanka Booco, iyadoo markaasi aysan jirin wax digniino ah oo ay dadkaasi u jeediyeen.
Ururka Al Shabaab ayaa waxay muddooyinkii dambe ay beegsanayeen goobaha aroosyada, ee lagu muujinaayo dhaqanka iyo weliba ciyaarta Hidaha & Dhaqanka, oo ay Soomaalidu ku faanto.
« Madaxweynayaasha Somalia iyo Sudan oo kawada hadlay lacag loo daabacay Dowladda Soomaaliya iyo Arrimo kale
KENYA OO AMNI DARADA DALKEEDA KU EEDEYSAY CIIDAMO SOOMAALI AH »